မြင်းမိုရ်ဦး: အလှအပရဲ့လျို့ဝှက်ချက်များ - မျက်နှာအလှ
အလှအပဆိုတာကိုလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဒါမှမဟုတ်အာရုံခံစားမှုကိုအမြင့်ဆုံးနှစ်မြို့ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ် (Webster, 1988)။ ကမ္ဘာဦးခေတ်ကတည်းက လူတွေဟာ မျက်နှာနဲ့ကိုယ်တွေပေါ်မှာ မြေကြီးတွေလိမ်းကျံအလှဆင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူမျိုးအမျိုးမျိုး ယဉ်ကျေးမှုအဖုံဖုံရှိကြလို့၊ အလှအပကိုခြယ်မှုန်းတာချင်းမတူကြပေမယ့်၊ အလှအပအပေါ်ခံစားတုံ့ပြန်မှုကတော့ တကမ္ဘာလုံးမှာအတူတူပါဘဲ။ ဥပမာ အာဖရိကကတချို့လူမျိုးတွေအတွက် နှုတ်ခမ်းတွေနားတွေမှာ ရောင်စုံကျောက်တုံးပြားတွေထည့်တာဟာအလှဆုံးဖြစ်သလို ပဒေါင်လူမျိုးတွေအတွက် လည်ကွင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အလှအပကိုသတ်မှတ်ဖော်ညွှန်းနေကြပါတယ်။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာအလှအပရဲ့အရေးပါပုံကိုသုတေသနတွေလုပ်ထားတာတွေအရ၊ မွေးစကလေးငယ်လေးတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ချောမောလှပတဲ့သူကိုပိုပြီး၊ ခင်မင်တုံ့ပြန်တတ်ကြပြီး၊ မျက်နှာဝိုင်းတဲ့သူကို လေးထောင့်ကျတဲ့မျက်နှာရှိသူတွေထက်ပိုပြီးကပ်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့ (Langlois et al 1987)။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေဟာ လခပိုကောင်း၊ အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့အလုပ်တွေရလေ့ရှိတယ်လို့လည်းသုတေသနတစ်ခုကဆိုပါတယ်။ Criminologists တွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ၊ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်မှုရှိတဲ့ရာဇ၀တ်သားတွေဟာတရားသူကြီးတွေရဲ့ပိုပြီးပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းဆက်ဆံတာခံရပြီး၊ ရုပ်ဆိုးတဲ့သူနဲ့စာရင်ပိုပြီးလျော့ပေါ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဘဲရတတ်ပါတယ်တဲ့။ (အဲဒီထဲမှာအပြစ်ကြီးတာငယ်တာတရားသူကြီးနဲ့မဆိုင်တဲ့မြန်မာမပါပါ..)ကျောင်းတွေမှာလည်း ရုပ်ရည်ပြေပြစ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက ပိုပြီးအောင်မြင်တတ်၊ ဆရာတွေရဲ့အလိုလိုက်တာခံရလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒီဥပမာတွေကြည့်ရင်၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာအလှအပကိုသိစိတ်မသိစိတ်က ဦးစားပေးတတ်ကြပြီး၊ လူတွေကလည်းမလှလှအောင်၊ ကြည့်ကောင်းအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်နေကြရပါတယ်တဲ့ (Goldstein, 1993)။
သွားပုံသဏ္ဍာန်၊ အရောင်၊ အနေအထားတွေပြောင်းသွားတာနဲ့မျက်နှာအလှအပပြောင်းသွားတဲ့အထိ၊ သွားနဲ့မျက်နှာအလှအပဟာဆက်စပ်နေတာမို့ ကျွန်တော်တို့သွားဆရာဝန်တွေဟာ အလှအပအကြောင်းမဖြစ်မနေသိထားရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ မျက်နှာအလှအပအကြောင်းဗဟုသုတလေးတွေဝေမျှချင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလှအပမှာ အ၀တ်အစား၊ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်၊ လည်ဆွဲရတနာစတဲ့အသုံးအဆောင်ဆင်မြန်းတာနဲ့မျက်နှာအမူအယာစတာတွေကလွှမ်းမိုးမှုအများကြီးရှိပေမယ့်၊ ပင်ကိုယ်မျက်နှာအလှအပအတွက် အဓိကအကျဆုံးက မျက်နှာအချိုးအစားကျနမှုဖြစ်ပါတယ်။ Cunningham (1986) ကမျက်နှာအလှအပကိုသင်္ချာကိန်းတွေနဲ့ဖော်ပြတွက်ချက်လို့ရအောင်၊ ကမ္ဘာ့အလှမယ်ရွေးပွဲတွေကဇကာတင်၂၅ဦးအပါအ၀င်၊ အမျိုးသမီး ၅၀ဦးရဲ့မျက်နှာတွေကိုလေ့လာမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ၊ ပြည့်စုံလှပတဲ့မျက်နှာအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရပါမယ်။
၁။ မျက်လုံးရဲ့အလျား (AB)ဟာ မျက်လုံးနေရာနဲ့တစ်တန်းတည်းကမျက်နှာဗျက်အကျယ် (CD)ရဲ့ ၁၀ပုံ၃ပုံ ရှိရပါမယ်။ (Fig 1)
၂။ မေးရဲ့အရှည်(AB)ဟာ မျက်နှာအရှည်(CD) ရဲ့၅ပုံ၁ပုံ ရှိရပါမယ်။ (Fig 2)
၃။ မျက်လုံးအလယ်ဗဟိုကနေ မျက်ခုံးမွှေးအောက်စပ်အထိအကွာအဝေး(AB)ဟာ မျက်နှာအရှည်(CD)ရဲ့ ၁၀ပုံ ၁ပုံ ရှိရပါမယ်။ (Fig 3)
၄။ မျက်ဆံရဲ့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းရဲ့အရှည် (EF)ဟာ မျက်နှာအရှည် (CD)ရဲ့ ၁၄ ပုံ၁ပုံရှိရပါမယ်။ (Fig 3)
၅။ နှာခေါင်းရဲ့စုစုပေါင်းဧရိယာဟာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးဧရိယာရဲ့ ၅ရာခိုင်နှုံးအောက်ဘဲရှိရပါမယ်။
၆။ ပါးစပ်ရဲ့အကျယ်(AB)ဟာ ပါးစပ်နဲ့တစ်တန်းတည်းရှိတဲ့မျက်နှာဗျက်အကျယ်(CD)ရဲ့၅၀%ရှိရပါမယ်။ (Fig 5)
ဒီသချာင်္ကိန်းနဲ့တွက်ချက်ဖွဲ့ဆိုချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်၊ အချိုးကျဟန်ချက်ညီတဲ့ ပုံမှန်မျက်နှာလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီး၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာအဖြစ် မြင်ကြပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ လှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမှာ၊ မျက်လုံးခပ်ကြီးကြီး၊ နှာခေါင်းနဲ့မေးစေ့ခပ်သေးသေး၊ ပါးရိုးမြင့်မြင့်နဲ့၊ အချိုးကျကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့အပြုံးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ချောမောတဲ့အမျိုးသားဆိုရင်တော့ မျက်ခုံးမွှေးထူထူ၊ ပေါ်လွင်တဲ့မေးရိုးနဲ့ အထက်ကအချက်တွေပါဝင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Ref: Anatomy of ‘A Beautiful Face & Smile’ by Patnaik in J Anat. Soc.
Posted by Dr. Nyan at 5:45 PM
heee heee heeee like me . :P :P :P
ရယ်ကလွဲရင် အားလုံးအချိုးကျ၊ စံနှုန်းပြည့်ဘဲ။ :P
ဦးဥာဏ် နာမယ်။း( ဟဟ
အပေါ်က မ၀ါနဲ့ ဆရာ့ comment က ပိုပြီး ရီရတယ်..
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှအပနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုကြားဖူးတယ်.. မှန်မမှန်တော့ မသိဘူးရယ်.. အရင် အာရှဓနဘဏ်ခေတ်ကောင်းတုန်းကဆို အဲဒီက ကောင်မလေးတွေ အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ သတ်မှတ်ထားတာတခုရှိတယ်တဲ့။ မလှတာက သင်လို့ မရဘူးတဲ့.. မတတ်တာက သင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး ချောတာလေးတွေပဲ ရွေးပြီး အလုပ်ခေါ်တာ ကြားဖူးတယ် ဆရာ။ အဲဒီကတည်းက ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိလို့သွားတောင် မလျှောက်တော့ဘူး.. :D
မယ်မနုစံနဲ့ sin dan lar ရေ။ အရိုက်ခံရသက်သာအောင်
မဟုတ်ဘဲ customer တွေစိတ်ချမ်းသာ
ကြဲကုန်တာ၊ မျက်နှာအလှတွေက အဟောသိကံဖြစ်သွား
ဟင်. တိုင်းရမှာလား.. ပေတံလည်းရှိဘူး.....
တိုင်းတော့ပါဘူး တော်ကြာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မချောဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျသွားအုံးမယ် ချောတယ်ပဲမှတ်လိုက်မယ်.. ဟီးး.... အလှအပဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားပြီးလာချောင်းတာ. ဟဲဟဲ. အကိုဥာဏ်နဲ့မမဝါတို့ရေးထားတာရယ်သွားရတယ် :D
အာရှဓမြဘဏ်က ပုကွမဲ မခန့်ဘူး
အဲ့ ကုမ္ပဏီသူဌေးက အမြဲတမ်း စားသောက်ဆိုင် သွားဖို့အခေါ်ခံရတယ်ဆိုတော့
အရုပ်ဆိုးဆိုး အသားမဲ နဲ့မလှပတဲ့တို့ဘ၀မို့..
ဟဟ.. အာဝါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး :P :P :P